တွေ့ရ မြင်ရ မသက်သာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » တွေ့ရ မြင်ရ မသက်သာ
တွေ့ရ မြင်ရ မသက်သာ
Posted by annonymous on Aug 10, 2011 in Copy/Paste | 13 comments
ကိုယ္ခ်င္းစာ တရားေလး ထားၾကပါ
ကျွန်မတို့နိုင်ငံ က ထေရ်ဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပါ။ ဒါပေမဲ့ ခုနောက်ပိုင်းလူတွေကို ကြည့်ရတာ ယဉ်ကျေးမှု ၊ ရိုသေနားလည်မှု ၊ စာနာမှုတွေလဲ အလွန်ခေါင်းပါးတယ် လို့တွေးမိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကားစီးတဲ့အခါ လူတွေရဲ့ အတ္တတွေကို ပိုတွေ့ရပါတယ်။ ကားပေါ်မှာ ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးသူတွေ့ရင် ပေးထိုင်ရမှန်းမသိတာလား ၊ မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်တာဖြစ်ဖြစ်နဲ့ ပေကတ်ထိုင်နေကြပါတယ်။ သံဃာ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီး၊ ကလေးတွေကို ငဲ့ညာ သင့်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေ မရှိကြတော့ဘူး ထင်ပါရဲ့။ ဒါဆို ကားတွေပေါ်မှာရေးထားတဲ့ သံဃာနဲ့အသက်ကြီးသူများ ဦးစားပေးပါဆိုတဲ့စကားက မှားပြီလို့ထင်ပါတယ်။
ကျွန်မမနက် အလုပ်လာတုန်းက အဖြစ်အပျက်လေး တစ်ခုကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့အလုပ်က လှိုင်သာယာမှာရှိလို့မနက်ဆိုလိုင်းကားစီးဖြစ်ပါတယ်။ ကားကလဲ 96 ဒိုင်နာကားပေါ့နော်။ ကားက လူတော်တော်ကြပ်ပါတယ်။ ဘုရင့်နောင်ရောက်တော့ သက်ကြီးပိုင်းသံဃာတစ်ပါးတက်လာပါတယ် ။ သံဃာကြီးက အလွန်အသက်ကြီးနေပါပြီ … သူ့ခမျာတုန်တုန်ချိချိဖြစ်နေတာပါ … ကျွန်မလို လူငယ်တောင် ကားကိုသေသေချာချာ လက်အံသေအောင် ကိုင်ထားရပါတယ် … ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ (ဒိုင်နာကားစီးရတာ ဇီးဖြူသီးဇကောထဲထည့်လှိမ့် သလိုမျိုးနဲ့တူပါတယ်) ။
ကျွန်မရပ်နေဘေးဘက်အတန်းမှာ ယောကျာ်းတွေအများဆုံးထိုင်တာပါ။ ကြီးသူ၊ငယ်သူ အရွယ်စုံပေါ့နော် အဲ့လိုအချိန်မှာ ကားပေါ်ပါတဲ့ယောကျာ်းတွေရဲ့စိတ်ကို အလွန်အံဩမိပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ သံဃာကို ဘယ်သူမှနေရာက ထပေးဖို့မစဉ်းကြပါဘူး။ ကျွန်မသာဆိုမနေနိုင်ပါဘူး ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့သူဆိုလဲထပေးပါတယ်။ ကိုယ်ထက်အသက်ကြီးအဖိုးအဖွားအရွယ် လဲထပေးပါတယ်။ သူတို့ခမျာ လှုပ်လှုပ်ပဲကျန်တော့တဲ့အရွယ်မို့လို့ပါ။ နေရာရရင်တောင် လုမထိုင်ပါဘူး အသက်ကြီးသူကိုဦးစားပေးလိုက်ပါတယ်။ ခုတော့ကားပေါ်ထိုင် နေသူအားလုံး ယောက်ျားတွေချည်းပါပဲ တစ်ယောက်မှထမပေးကြပါဘူး ။ ရှက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ မြင်ကွင်းပါပဲ ။ စပယ်ရာကလဲသူ့ဘာသာလူကြပ်ပြီး နေရာထပေးဖို့မပြောပါဘူး ။ ကျွန်မအနေနဲ့ဒေါသထွက်ရုံကလွဲလို့ ဘာမှပြောခွင့်လဲမသာ ခဲ့ပါဘူး။
ကျွန်မကားပေါ်က ဆင်းလာခဲ့သည့်တိုင်အောင် သံဃာအိုကြီးကိုနေရာ က ဖယ်ပေးတဲ့ သူကိုမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်မဆရာတော်တစ်ပါးဟောတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ကိုသွားသတိရမိပါတယ် ငရဲကိုအများဆုံးသွားရတာ ဒကာကြီးတွေများတယ်တဲ့ ဆရာတော်ဟောတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ် ။ ဟုတ်တယ်လို့လဲ ထင်လိုက်ပါတယ် ဒီလောက်အသက်ကြီးနေပြီး ဒါလေးမှ မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလား လမ်းခရီးတစ်ထောက် နေရာလေးတစ်နေရာပေးလိုက်တာ ဘယ်လောက်များအပန်းကြီးသွားလဲ ဆိုတာ ကိုစဉ်းစားမိလို့မပေးတာ များလားလို့တောင် ထင်မိပါတယ် တစ်ခါတစ်လေ တစ်ချို့လိုင်းကားပေါ်မှာရှိပါသေးတယ် စပယ်ရာ ဒီလောက်နေရာဖယ်ပေးဖို့သံဃာ ခုံတောင်းတာတောင်ထမပေး တဲ့သူတွေကို တွေ့ဖူးပါသေးတယ် ။
တခါတလေ မိန်းခလေးနဲ့ အပြိုင်နေရာလုထိုင်ရဲတဲ့ ကောင်လေးမျိုးတွေလဲ အများကြီးတွေ့ဖူးပါတယ် ။ လူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ကြည့်ရတာလဲ အလွန်မှ စာနာမှုကင်းမဲ့တဲ့ မြင်ကွင်း မျိုးလို့ ထင်ပါတယ်။အကျင့်ပျက်တဲ့ နိုင်ငံ သံဃာကို မလေးစားတဲ့ နိုင်ငံမဖြစ်သင့်ဘူး လို့ထင်ပါတယ် ။ လူမျိုးခြားက လွဲပီး မည်သည့်အတန်းအစားမဆို နိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာအများဆုံး ပါ ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်းမှ ကို်းကွယ်တဲ့ သံဃာကို အလေးမထားရင် ဖြင့် ကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့ နောင်တစ်ချိန် သံဃာတော်ကွယ်ပျောက်မှာ အလွန်ပဲ စိုးရိမ်မိပါတယ်။ ကျွန်မ တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ လဲ အပန်းမကြီးတဲ့ ခရီးလမ်းတစ်ထောက်မှာ ဤကဲ့သို့အဖြစ်မျိုး ကြုံကြိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် မေတ္တာရှေ့ထားပြီးကူညီပေးကြပါလို့ အကူအညီတောင်းခံအပ်ပါတယ် …
View all posts by annonymous →
လိုင်းကားပေါ်ကကြောင်း ပြောရလျင်တော့ ပြောဆုံးမည် မထင်ပါဗျာ..
လိုင်းကားမှ မဟုတ်ပါဘူး ။နေရာတော်တော်များများမှာတွေ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်မြို့ပေါ်မှာပေါ့။
ကျွန်တော့်ရဲ့အတွေ့အကြုံအရတော့မွေးကတည်းမကောင်းတဲ့သူကရှားပါတယ်။သူဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်။သူ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့ အမူအကျင့် တွေ့ကြောင့်ထင်တာပါပဲ။ဒါကအထင်ပါပဲ။
သူများနိုင်ငံတွေမှာရော ဘယ်လိုလဲ ။ ဘာသာကြောင့်လား ဘာသာနဲ့သိပ်မဆိုင်ဘူး။ဒါဆိုဘာကြောင့်လဲ။လက်တွေ့မလုပ်ရင်တောင် အဖြေတစ်ခုရရင်တော့ မဆိုးဘူးပေါ့နော်။ ပညာရှိ ရွာသားများဝို်င်းဝန်းမန်းကြပါလား။
ကျွန်မစဉ်းစားမိတာလေး ရှိပါတယ် ။ ကျွန်မတို့ရွှေမြန်မာတွေက မဟုတ်မခံတဲ့စိတ်၊ ကိုယ်လူမျိုးကို ကာကွယ်ချင်စိတ်အပြည့်ရှိတဲ့သူတွေပါ။ ဒါပေမဲ့ ခုနောက်ပိုင်းလူတွေကို ကျွန်မကြည့်ရတာ အတ္တတွေပိုများ ပြီး နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်တစ်ခုကြည့်ရသလိုပါပဲ ။ သူတပါးဒုက္ခရောက်နေရင် ဝိုင်းကြည့်နေပီး ကူညီပေးသူမဲ့တဲ့အခြေအနေ ကိုရောက်ချင်းမလှရောက်နေကြတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
နောက်မှ ကို်ယ်တွေ့လေး ရေးတင်လိုက်ဦးမယ်
အခုလိုတင်တာ ကောင်းပါတယ်.. ကျွန်တော်တောင် တင်ဖို့ စိတ်ကူးသေးတယ်ဗျ မအားလို့ .. ဒါမျိုးကလည်း တင်သင့်ပါတယ် ..
ကိုယ့်ထက်အားနည်းသူကို စာနာရမယ်ဆိုတာ လူ့အသိစိတ်လို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။ တိရိစာ္ဆန်ဆိုတာကို အားကြီးသူက အားနည်းသူကို နိုင်ထက်စီးနင်းလုပ်တာနဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ပြထားပါတယ်။
တခါက ဆရာတော်တစ်ပါး နိုင်ငံခြားရောက်တော့ နိုင်ငံခြားသားတွေက မြန်မာတွေ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ အလှူအတန်း အလွန်လုပ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ကမာ္ဘပေါ်မှာ ဆင်းရဲတဲ့စာရင်းထဲမှာပါနေတယ်။ လှူရင် ချမ်းသာမယ်လို့ ဗုဒ္ဓဘာသာက ပြောတယ် မဟုတ်လားလို့ မေးကြတယ်တဲ့။ အဖြေကို ဝိုင်းစဉ်းစားကြည့်ပေးကြပါဦး????????????????
ကိုယ့်အယူအဆအတိုင်းဆိုရင် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကြိုက်နှစ်သက်တယ်။ လိုက်နာနိုင်အောင် ကြိုးစားတယ်။
မလှူတက်ကြသေးဘူး လို့ထင်ပါတယ် ။ တကယ်တော့ညောင်ပင်ကြီးလောက်လှူပြီး ကုသိုလ်ရချင်မှ ရတာပါတဲ့ ညောင်စေ့လောက်လှူပီးကုသိုလ်ရတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ ကြားဘူးပါတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆို အလှူအတန်း ရက်ရောတဲ့သူတွေအများကြီးပါ ။ လှူတန်းတဲ့ စိတ်စေတနာနဲ့ လူသားခြင်းစာနာထောက်ထားမှုက ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ အမှန်တကယ်ပြောရရင် မမပြောသလိုပါပဲ ကိုယ့်နိုင်ငံအလှူအတန်းရက်ရောပီး မချမ်းသာတာ တွက်ကပ်မှုတွေရှိလို့ ၊စာနာမှုတွေ နည်းလို့ ထင်ပါတယ်။ ငယ်တုန်းက ကျောင်းဖတ်စာမှာ သင်ရသလိုပေါ့ ထင်းစည်း လို စည်းလုံးမှုမရှိရင် အရာရာက ပျက်စီးလွယ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အခုခေတ်မှာတော့ ဦးစားပေးဆိုတာ မရှိတော့ဘူး ထင်တယ် ..
ဦးသူ စား စနစ် ဖြစ်နေပြီ ..
ဒါတောင်မှ ကြားဖြတ်တိုး စနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်တဲ့လူတွေ အကောင်အထည် ဖော်နေပြီ
အဲဒီ သံဃာအိုကြီးရဲ့နေရာမှာ ခက်မိုက်မိုက်ဒီဇိုင်းလေးနဲ့ လန်ထွက်နေတဲ့အလန်းလေးဆိုရင်တော့….စပါယ်ယာရော…ကိုကိုတွေ၊ဦးဦးတွေက သူ့ထက်ငါဦးအောင် အပြိုင်ဝိုင်းပြီးနေရာပေးလိုက်ဖြစ်ခြင်း…ဟုတ်မဟုတ် မယုံရင်စမ်းကြည့်လိုက်စမ်း..သွေးထွက်အောင်မှန်စေရမယ်…
Morality comes from good standard education.
မှန်ပါတယ် မ annonymous ရေ …
အခုတလော နေရာတော်တော်များများမှာ အမြင်မတော်တာတွေကို တွေ့တွေ့နေရတယ်။ တွေ့နေမြင်နေရတာတွေကိုသာ လိုက်ပြောနေရမယ်ဆိုရင် လူမုန်းများတာသာ အဖတ်တင်သွားမယ် သူတို့ကတော့ အကျင့်တွေကိုပြင်မှာမဟုတ်ဘူး …… ဟိုတလောတုန်းကလဲ မြို့ထဲက အပြန်ပေါ့ ကားပေါ်ကို သံဃာတော်က ကြွလာတယ် သံဃာနေရာမှာထိုင်နေတာက ကုလား …… မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ဆက်ထိုင်နေတယ် လုံးဝကိုမဖယ်ပေးဘူး စပယ်ယာကလဲ မတွေ့တာလား မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်နေတာလားမသိဘူး ဘာမှကိုမပြောဘူး …. ကိုယ်သာထိုင်စရာနေရာ ရနေတဲ့သူဆိုရင် နေရာပေးလိုက်တယ် …… နောက်တော့ မနေနိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က နေရာပေးလိုက်ရတယ် ….
ဒီအဖြစ်တွေဟာ မြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကျင့်စဉ် ဘာသာရေးကျင့်စဉ် လူမှုရေးကျင့်စဉ် စတဲ့ ကျင့် စဉ်တွေရဲ့ ကျင့်စဉ်ကောင်း ကျင့်စဉ်မှန်တွေကို ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ လူတွေရဲ့ အကျင့်ပျက်ကျင့်စဉ်ကြီး ကို လူတွေက မသုံးသပ်တတ်ပဲ အရိုးစွဲအောင် ကျင့်မိနေတဲ့ အကျင့်တွေရှိနေကြလို့ပါပဲ။ ဒီဖြစ်ရပ်ကိုကြားရ တာဟာ ဖြူးဆရာတော်ပြောသလို နားထဲမှာ ဗုှံးဆယ်လုံး တပြိုင်နက် ပေါက်ကွဲသလို ဆိုတာမျိုးလိုပဲ ကြားရ ကြားရ နားဝမှာ မသက်သာပဲကိုး။ ကိုယ့်လူတွေရဲ့ အကျင့်ပျက်မူတွေကို အတုခိုးမိရာက အတုခိုးမှုကြီး တာရှည်ရာက ဆင့်ပွားဆင့်ပွားပြီး အကျင့်မှား အကျင့်ပျက်တွေ ရှည်နေတာပါ။ ဒါကို သိကြမြင်ကြပြီး ပြင်ဆင် ကြမယ်ဆိုရင် အချိန်မီပါသေးတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ပဲ ဆက်လက်ပြီး လုပ်နေကြဦးမယ် ဆိုရင် အေအိုင်ဒီအက်(စ်) ရောဂါထက်ဆိုးပြီး ကုသစရာ ဆေးဝါးရှိတော့မှာ မဟုတ်ပါ။ အကျင့်ဆိုးအကျင့်မှား ၊ မြန်ပြည်သား ၊ ရှောင်ရှားနိုင်ပါစေ။
အကျင့်ကောင်းတွေ ၊ မြန်ပြည်ဝေ ၊ ငြိမ်းစေအေးစေနိုင်ပါစေ။
အနာဂါတ်မှာ ၊ ပြည်မြန်မာ ၊ သာယာချမ်းမြနိုင်ပါစေ။
There are so many reforms to initiate here in our country.
Bus owners modified comfortable original seats with smaller ones, giving very small space for leg, even difficult to sit down for tall people like me
Bus conductors are blocking the narrow entrance, making passengers difficult to get in and get down
People are never willing to help each other onacrowded bus, clinging to the seats even they were reserve for Sangha, they also neglect pregnant women and infants on board
Conductors are very poor and rude in dealing with passengers
Not only in Bus, business people from Myanmar are more greedy even golden Myanmar proudly claim how much they love their country, they only care about maximizing their profits. Maybe , that is on eof the reasons, we are left behind